Sri Lanka Tour avy any Bhubaneswar | Antsoy amin'ny: + 91-993.702.7574
Sri Lanka, fantatra taloha hoe Ceylon, dia nosy kely any atsimon'i India, any amin'ny Oseana Indianina, saingy io ihany no zavatra bitika momba ilay firenena mahafinaritra. Miaraka amin'ny fonosana Sri Lanka Tour avy ao amin'ny fonosin'i Bhubaneswar ianao dia ho hitanao ny seho mahavariana ao Sri Lanka. Ny sehatra isan-karazany dia avy amin'ny ala tropikaly sy ny tanimbolin'ny tanimboly mankany amin'ny tany tsara sy ny kirany amoron-dranomasina. Ny firenena dia mirehareha amin'ny fironana sivilizasiona fahiny, tora-pasika maitso sandoka miaraka amin'ny palma, tendrombohitra, ary fambolena fary sy tea. Miaraka amin'ny Sri Lanka Tour avy ao Bhubaneswar miaraka amin'ny Sand Pebbles, azonao atao ny mahazo ny zava-mitranga rehetra manadino an'i Sri Lanka. Raha mitsidika ny nosy ianao dia hahita ny rafitra kolonaly amin'ny andro izay nanjakan'ny Portiogey, Holandey ary Anglisy. Hitanay elefanta marobe, ny sasany amin'izy ireo dia mandray anjara amin'ny fetibe eto an-toerana, ary ny leoparda ao amin'ny fitoerana masina. Sri Lanka dia firenena manan-karena amin'ny resaka tantara, fomban-drazana ary kolontsaina. Ho an'ireo mpizaha tany tia manatri-maso ny tantaran'ny toerana rehetra, Sri Lanka dia manome telozoro kolontsaina ho azy ireo. Ny Tour de Sri Lanka avy ao Bhubaneswar dia hamela anao ho liana amin'ny zava-tsoa rehetra natolotra izay natolotra. Sri Lanka dia fantatra ihany koa amin'ny torapasika ivelany sy ny masoandro mamirapiratra manerana ny taona. Sri Lanka dia miavaka amin'ireo valan-javaboarim-pirenena lehibe toy ny valan-javaboahary Yala, valan-pirenena Wilpattu, valan-javaboarim-pirenena Minneriya, valan-pirenena nasionaly Udawalawe sy Horton Planes. Ny Tour de Sri Lanka avy ao Bhubaneswar dia hamela anao hijery ny lanitra kely any amin'ny Ranomasimbe Indiana.
Manana zavatra atolotra ho an'ny mpizahatany isan-karazany izy- ny mpitaiza ny biby, ny ankizy, ny fahazaran-dratsy na ny karazany hafa. Ny fitomboan'ny fizahan-tany ao Sri Lanka dia tsy misy marika hijanonana tsy ho ela na ho ela. Betsaka ny saran-dalan'ny fialan-tsasatra Sri Lanka ankehitriny.
DAY 01: KATUNAYAKE - KANDY - 115 Kms 2.5 ora
Tonga tany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Bandaranaike, Katunayake noraisin'ny solontenan'ny "Spiceland Colombo" ary nafindra tany amin'ny hotely tao Kandy tamin'ny alàlan'ny Pinnawala.
Elefanta fitaizana zaza kamboty, Pinnawala:
Ny foster - tranon'ny elefanta amin'ny vanim-potoana isan-karazany sy ny habeny, ny fandroana, ny fialamboly ary ny fanangonana. Ireo no naratra na navela tany an-tany efitra. Na dia zanak'omby kely kely aza teraka tao amin'ny fahababoana.
Ny latabatry ny fitaoman-jaza elefanta:
08.30am Manokatra ny trano fitaizana zaza kamboty ho an'ny mpitsidika
Tavoahangy 09.15am mamelona ireo elefanta zazakely
10.00am Mandroandro maraina amin'ny 'Ma Oya'
Ny Elefanta 12noon dia niverina tany amin'ny trano fitaizana zaza kambana taorian'ny bata
Tavoahangy 01.15pm mamelona ny elefanta zazakely
02.00pm Mandroandro ny tolakandro ao amin'ny 'Ma Oya'
Elefanta 04.00pm miverina any amin'ny trano fitaizana zaza kambana taorian'ny bata
Tavoahangy 05.00pm mamelona ny elefanta zazakely
06.00pm Famaranana ny trano fitaizana zaza kamboty ho an'ny mpitsidika
Spice Garden ao Hingula (Kandyan Spice 99):
Mipetraka eo amin'ny làlambe lehibe eo anelanelan'i Colombo sy ny renivohitr'i Kandy. Tsidiho ny saha ara-tsakafo Hingula ao Mawanella mba hahitana karazana zavamaniry maro samihafa Sri Lanka malaza. Zavamaniry, Cardamom, Pepper, Fitrandrahana ary ny moka no namboly izany toerana izany. Ankoatra ny zava-manan'aina manokana, namidy ny dikan-tsoron'ny Sri Lankan karaoty ny tranobe.
Temple Of The Relic Tooth, Kandy:
Ny Tempolin'ny Amboaram-bolo masina eo amin'ny Bouddha Ny Tempoly manan-danja indrindra amin'ireo Bodista Sri-Lankais ary naorina tamin'ny taonjato faha 16th century AD avy amin'i King Wimaladharmasooriya, afa-tsy ny hametrahana ny reliet'ny nify.
Alakamisy sy alakamisy alina mijanona ao amin'ny Hotel ao Kandy.
Ny sakafo maraina ao amin'ny Hotel in Kandy & miala amin'ny Nuwara Eliya amin'ny Via Perena sy Ramboda.
Zaridainan'ny Mpanjaka Botanika, Peradeniya:
Zavamaniry mahafinaritra iray an'ny Mpanjaka Kandyan tamin'ny taonjato faha 16th ary nipoitra tao amin'ny Zaridaina Botanika nandritra ny fitondrana britanika.
Hetsika miasa: 7.30am - 5.00pm (isan'andro)
Restaurant sy café: 10.00am - 5.00pm
Tranombakoka Gem ("Tiesh" an'i Lakmini):
Ny Tiesh, fantatra amin'ny anarana hoe Lakmini Pvt Ltd, dia fialokalofana ho an'ny vatosoa sarobidy sy firavaka mahavariana amin'ny hatsaran-tarehy tsara indrindra nandritra ny taona. Anisan'ireo vato sri-kankana sarobidy malaza manerana izao tontolo izao dia ny Blue Sapphires, Star Sapphires, Rubies, Star Rubies, Sapphires White, Sapphires mavo, Cats Eye, Etc.Ana ny endriky ny tranokala dia sim-roimangan'ny mavo izay nampiasaina mba hampisy loharano sarobidy jiro vato any Sri Lanka. Ny tsara indrindra dia i Sri Lanka tena ao amin'ny tanàna-tsara tarehy Kandy "Tiesh" Caters ho an'ny sehatry ny mpanjifa. Tiesh avy ao Lakmini dia teo am-piandohan'ny famolavolana maoderina tamin'ny endriky ny famolavolana maoderina hatramin'ny fananganana azy tamin'ny 1997.
Manodidina ny 1500 metatra ambonin'ny ambony eny an-dranomasina ao am-pon'ny Labookellie Estate, iray amin'ireo tanimboly tsara indrindra any Sri Lanka, dia fijanonana amin'izao fotoana izao any an-dalam-pandehanana iraisam-pirenena, izay manome fahafahana ny maka ny Mackwoods Tea amin'ny tsara indrindra any amin'ny toerana fialokalofana ary koa ny famelabelarana ny famokarana ny Ceylon Tea. Ny Tea Tea Labookellie izay efa ela dia marika famantarana ny tany teo amin'ny mponina sy ny mpizaha tany nankany Nuwara-Eliya avy any Kandy noho ny fepetra takian'izy ireo momba ny Tea Labookellie Tea. Ity Tea Center ity dia navaozina sy navaozina mba hanomezana ny mpitsidika maro sy mpanjifa tsara kokoa ny asa fanompoana amin'ny toerana tsara kokoa. Mackwoods dia manome mpitsidika amin'ny fitsidihana maimaim-poana ataon'ny Labookellie teatra, fanandramana ara-panabeazana amin'ny fambolena dite sy ny fizotry ny famokarana.
Mandeha haingana be eny amoron-tendrombohitra, ala matevina sy lohasaha Tea Estates, renirano kely ao amin'ireo avobe afovoan-tany dia miteraka siramamy tsara indrindra any Sri Lanka, iray amin'ireo dia ny "Ramboda Waterfalls" ao Nuwara Eliya. Mankanesa any amin'ny havoanan'i 3200ft. Ny reniranon'i Ramboda dia miteraka avonavona sy voninahitra ho an'ity nosy mahafatifaty ity, izay mahatonga an'i Sri Lanka ho toerana manan-tantara ho an'ny mpizaha tany ho an'ny romantic escapee & nature lover.
Alakamisy sy alakamisy alina mijanona ao amin'ny Hotel ao Nuwara Eliya.
DAY 03: NUWARA ELIYA - BENTOTA - 240 Kms - 5.5 ora
Mandritra ny trano fandraisam-bahiny ao Nuwara Eliya ary miala ao Bentota
Sakafo atoandro sy sakafo maraina Mitoetra amin'ny hotely any Bentota.
DAY 04: BENTOTA - COLOMBO - 65 Kms - 2 ora
Breakfast ao amin'ny Hotel, Bentota ary mivoaka ho an'i Colombo
Tortoise Hatchery, Kosgoda:
Nosokafana ireo tetikasa mba hitazomana ny mponina amin'ny sokatra izay hahatratra ny fandroahana ary tetikasa toy izany no hita any amin'ny morontsiraka atsimon'i Sri Lanka izay misy sokatra tonga eo amin'ny atody hametraka ny atody. Ny sokatra dia mihady lavaka eny amoron-dranomasina, Mamela ny atodiny ary manarona izany amin'ny fasika izay heverina ho voan'ny hafanana amin'ny masoandro. Ny zava-mitranga matetika dia ny mpanjono nohadinoina ary atakalo amin'ireo olona mandany azy ireo. Fa ankehitriny, novaina ireo tetik'asa momba ny fiarovana ireo atody ary voasarona amin'ny fomba voajanahary any amin'ireo faritra voafetra izay tsy ahafahan'ny vorona manangona azy ireo ary alefa any an-dranomasina ny zazakely rehefa afaka roa andro amin'ny alina izay manolotra izy ireo dia mety kokoa ny ho tafavoaka velona.
Mandehana manerana ny foibe ara-barotra sy ny tanàna fantatra amin'ny anarana hoe Fort, naorin'ny portogey tamin'ny taonjato faha 16. Tsidiho ny tsenam-bola be sy ny bazaaran'i Pettah, mitsidika Buddhist sy tempolin'i Hindu, fiangonana Holandey taloha ary manohy ny toeram-ponenana ao Cinnamon Gardens. Mandehana mamakivaky ny Lapan'ny Tanàna, ny Kianjan'ny Fahaleovantena ary ny BMICH (International Convention Center).
Shopping amin'ny; (amin'ny mahaliana)
modely trano ny Fashion
Sakafo atoandro sy sakafo maraina Mitoetra amin'ny hotely any Colombo.
DAY 05: COLOMBO - KATUNAYAKE - 37 Kms - 1 ora
Fiaraha-misakafo ao amin'ny Hotel ao Colombo.
Araka ny fialan-tsoavinao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Bandaranaike, Katunayake amin'ny fialan-tsasatra. Fiafaran'ny fitsidihana.